Toetrandro - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Toetr'andro)
Oram-baratra ao akaikin'i Garajau any amin'ny faritr'i Madeira any Portogaly.
Ny toetrandro dia ny fitambaran'ny zava-miseho ao amin'ny sosona ambany ao amin'ny habakabaka manodidina ny tany na ny planeta hafa amin'ny fotoana voatondro sy amin'ny toerana voafaritra iray. Mampiditra ao amin'ny sehatry ny toetrandro ireo zava-miseho manana fiantraikany tsapan'ny olona na ny zavamananaina hafa, toy ny rahona, ny taratry ny masoandro, ny hafanana, ny rivotra, ny orana ary ny fahazavana.
Singa efatra no miara-miasa mba hanome toetrandro, dia ny tsindrin'ny soson-drivotra, ny hafanana, ny hamandoan'ny soson-drivotra ary ny rivotra. Ireo singa ireo koa dia iharan'ny asan'ny singa dimy hafa, dia ny laharam-pehintany, ny haavon-toerana (mitaha amin'ny ranomasina), ny bamban-tsiriana, ny rian-dranomasina, ny fitsijaran'ny erana amin'ny tany sy ny ranomasina.
Ny zava-mitranga miteraka ny toetrandro dia mety hiseho amin'ny habe ara-potoana sy arak'erana samihafa: mitranga ao anatin'ny ora vitsy na mandritra ny andro maro, miseho amin'ny toerana na tanàna iray na ao anaty kilometatra toradroa anarivony. Ireo rehetra ireo dia mahazo angovo avy amin'ny masoandro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toetrandro&oldid=976755"
Voaova farany tamin'ny 11 Novambra 2019 amin'ny 10:48 ity pejy ity.